Best Cross Border tababartay Si Qaado In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Best Cross Border tababartay Si Qaado In Europe
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 23/10/2020)
New-xawaaraha sare, tareenada xuduudaha sii wadi in la furo khadadka dunida oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, waxay had iyo jeer ku garaacday safarka hawada ku saabsan raaxada, faa'iidada, iyo xawaaraha safarka. Markan, waxaa jira shabakado tareen iyo aad u badan oo adduunka ah! Qof kasta oo uu galay tareenada xuduudaha u jecel yahay!
Safraan Europe on tareen waa badan oo ku saabsan deceleration badan xawaaraha. As you pass sceneries qurux badan marka aad u si caga final, you feel serene and wonderful. Sidaas darteed, going on cross border trains becomes a time to relax, waxay leeyihiin waqti qaar ka mid ah on adiga kuu gaar ah oo xataa ka fikiraa.
Sidaas, aynu hubi qaar ka mid ah tareenada xuduudaha ugu fiican Yurub wada:
Tareenadu Eurostar Cross Border
Ku xiridda London kula Amsterdam, Avignon, Brussels, yar, Lyon, Marseille, Paris iyo Rotterdam, Eurostar malaha waa ka-xawaaraha sare ee ugu caansan adeegga tareenka ee Europe. Sidoo kale, Getlink si gooni gooni ah ka shaqeeya oo leh tareenada. Waxay Diidada Channel Tunnel ka dhexeeya boqortooyada Ingiriiska iyo France. Ordaya on shabakad of Xawaare sare khadadka, Eurostar Tababar count Class siddeed iyo toban-baabuur 373/1 tareenada iyo Class lix iyo toban-baabuur 374 tareenada. Waxay u ordaan ee ilaa 186 mph (300 kiiloomitir saacaddiiba). Intaas waxaa sii dheer, Eurostar xanbaarsan rakaab badan wixii ay dhammaan shirkadaha diyaaradaha ay weheliso. Arintani waxa ay Eurostar wadaha rail xukuma ee wadooyinka in ay u hawlgasho.
tareenada Eurostar xuduudaha idiin qaadan doonaa iyada oo loo marayo United Kingdom, France, Belgium, iyo Netherlands ayaa. Plus, waxa u ogolaan doonaa in aad ku raaxaysan muuqaal qurxoon ee waddooyinka, kuwaas oo jidka.
London si Tareenadu Rotterdam
Tareenadu Thalys Cross Border (Faransiis: [sida])
Markii hore dhisay hareeraha khadka-xawaaraha sare LGV Nord u dhexeeya Paris iyo Brussels, Thalys waa-xawaaraha sare operator tareen Faransiis-Belgian. Wadada tareenka ee Eurostar gawaaridu waxay wadaagaan track this, iyaga samaynta mid ka mid ah tareenada xuduudaha fiican. Thalys ka tagaa Paris, Brussels ama Amsterdam in London via Lille iyo Channel Tunnel iyo tareenada TGV gudaha Faransiis. Plus, Thalys adeegta Amsterdam iyo Cologne, sidoo kale! Tani waa news cajiib ah, waayo, qof kasta oo jecel in ay leeyihiin fursado badan oo ay safarka. Thalys International, NMBS / SNCB, iyo tareenka Jarmal maareeyo nidaamka halka Thi Factory iyo NMBS / SNCB u shaqeeyaan. Sidaas darteed – la Thalys – tababar ku safraya Europe sida xaqiiqada ah fantastic!
Amsterdam si Tareenadu Cologne
Hore loo yaqaan Hispeed NS, NS International waa operator tareenka ee Netherlands ee qof walba la il isha ku for ah waayo-aragnimo cajiib ah safarka. NS International ka hawl Tareenadu Border caalamiga inter-magaalada iyo-xawaaraha sare Cross la xidhiidh:
– Germany iyo Switzerland (Intercity-Express)
Iskusoo wada duuboo, NS International hadda ka shaqeeya adeegyada labada-xawaaraha sare iyo kuwa aan-xawaaraha sare iyo waa qayb ka mid ah Spoorwegen Nederlandse ah. Sidoo kale, NS International bandhigo waxaa laga yaabaa in adeegyada semi-sare-xawaaraha iyo-xawaaraha sare ee mararka qaar mustaqbalka dhow.
Brussels si Tareenadu Leiden
Antwerp in Tareenadu Leiden
Berlin si Tareenadu Haarlem
Paris si ay Tareenadu Haarlem
Tareenadu Border Cross – TGV The (Faransiis: A Tareenka Xawaaraha Sare)
SNCF shaqeeya TGV oo ah adeeg France ee Intercity-xadiidka xawaaraha sare iyo operator ugu fiican ee ay dawladdu leedahay qaranka rail. Inkasta oo markii hore xuddun ee Paris, network leeyahay, sanadihii la soo dhaafay, balaariyay. Waxaa hadda isku xira magaalooyinka waaweyn ee guud ahaan France (Marseille, yar, Bordeaux, Strasbourg, Rennes) dalalka ku xeeran. Waxaa ku saabsan tahay 110 milyan oo rakaab ah sannadkii France fuushan la TGV. Sida laga soo xigtay xogta ka April 2007, TGV waa tareenka ugu dhaqsiyaha badan taayir on, gaarey 574.8 km / h (357.2 mph). Waxaad la kulmi doonaa caalamka ugu fiican xidhiidh la Brussels ee Belgium iyo Luxembourg ee waqooyiga tareenada TGV, Hubaal.
TGV caalamiga ah ee bari idiin qaadan doonaa in ay Frankfurt iyo Munich. Sidoo kale, aad safaradiisa koonfurta si toos ah aad u qaadan doonaa Milan ee Italy ama Barcelona ee Spain. Ha ka dhigin khalad safar, TGV waa mid ka mid ah tareenada xuduudaha iskaga gudba! Intaas waxaa sii dheer, waxa aad qaadan doonaa oo safar ugu yaabka badan jaceyl ka Paris in xeebaha badda Mediterranean. Or, in Bordeaux u qurux badan, Lyon iyo Marseille oo Cannes caansan dunida ee ku. Sidaa darteed, haddii aad rabto si ay u gaaraan France iyo / ama Switzerland tareen, aad sameyn karto oo ay fuushan tareenada xuduudaha ay maamulaan TGV Lyria.
Paris si ay Tareenadu Frankfurt
Paris si ay Tareenadu Cologne
Si aad u hesho ugu wanaagsan waayo-aragnimo tareenka noloshaada, at qiimaha fantastic iyo gargaartay ajuurada jaale isnacsiiyeen, isticmaalka Save A tareenka
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cross-border-trains-europe/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / in ay / de ama / es iyo luuqado badan.
#renfe #traveleurope CrossBorder deutschebahn Eurostar tgv tareenada